Macnaha ereyga “Suugaan” – Kaasho Maanka
Ereyga ”Suugaan” oo laga wado maansada iyo waxyaalo kale ma aha erey ay soomaalidii hore macnahaas u yaqiinneen ee waxa uu macnahaas yeeshay xilligii kacaanka, laakiin waxa uu ereygu jirey isaga oo macneyaal kale leh. Xilligii kacaanka iyo intii ka danbaysey dad badan oo maansooday baa ereygaas maansooyinkooda ku daray, waxa ayna dadkaasi u badan yihiin dad aan u maansoon sidii dhaqankii hore. Dad badan oo kacaankii soo gaarey oo ah dadka u maansooda sidii dadkii hore ereygaas maansooyinkooda laga heli mayo, waxaana dadkaas ka mid ah Galayax, Aadan-Carab iyo Khaliif. Ereygu sida aan u fahmey la uu macne ma aha kalmadda qalaad ee ”Litteratuure”, waayo haddii wax laga qoro sida geela oo dhaqo ama beeraha loo tacbado waa ”litteratuure”, waxaa se laga yaabaa in uu ereygu la macne yahay ”Fiction” oo ah hadal kasta oo xallad ama sawir leh sida maansada, filimada, sheekooyinka iyo riwaayadaha. Maahmaahdu in ay ”Fiction” tahay shaki baa igaga jira, waxa aan se u malaynayaa in ay isugu jirto wax ah iyo wax aan ahayn.
Waxaa jira hadal ay dhawaanahan dad sheegaan oo ah in ay suugaantu u ka la baxdo ”Tix” iyo ”Tiraab” oo ka la ah hadalka habdhaca ama miisaanka leh iyo midka aan lahayn, dooddaasina labo siyaalood ayey u khaldan tahay, waxa ayna ka la yihiin in ereyga ”Tiraab” uu yahay dhawaaq kasta oo afka ama qalinka ka soo baxa ee uusan suugaanta hoos joogin iyo in dadka sidaas u hadlay ay xarafka ”T” uun ka duuleen ee aysan aqoon af ka duulin. Gabayga ama tixdu in ay tiraab yihiin eeg meeriska soo socda
Intii toban cisho ah baan markaan, taxo u kaadshaaye
Sidaan ahay talmiid baan laxniga, uga tiraayaaye
Goortaan tartiibshaan wax un, kaga tiraabaayeCismaan Keenadiid
Suugaantu guud ahaan saddex qaybood bay u ka la baxdaa, waxa ayna ka la yihiin hadal aan tix ahayn oo macaan sida sheekooyinka, hadal miisaan leh ama ay qaafiyadi u weheliso oo ay soomaalidu maanso u taqaan iyo wax muuqaal ahaan la isu tuso sida riwaayadaha iyo filimada. Faahfaahinta saddexdaas qaybood wakhti dheeraad ah bay u baahan tahay oo lacag la’aan idiin ku ma sharraxi karo.
QORMO LA XIRIIRTA: Reer miyiga soomaalida iyo reer galbeedka
Laba ama hal qormo OO cusub mooyaane inta badan waan akhriyey waxa lagu soo qoro pagekan .waa murti , philosophy , ilbaxnimo iyo baraarugin bulsheed badanka qoraalada halkan laga hela .sidoo kale maktabad si free ah u shaqaynansa waad aburteen. Waa legacy Iyo raganimo aad hirgeliseen.thanks dhamaan Bahda kaasho Maanka.
Mahad badani dushaada ha ahaato sxb Jorge
W/Q: Shaafici Xasan Maxamed 25th September 2019